Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 11/02/2020)
Italy is one of the most popular countries in Europe to visit because of the variety of dzokugara mukati kwayo miganhu. Northern Italy iri Premier hotspot kana totaura Italian tsika, nezvakawanda kuti vafambi kuona uye kuita. Kana zvakabudiswa waini yakanaka uye achidya pamusoro nyika-kirasi chili kana kudzidza yekare nematende uye machechi, ichi nharaunda zvinowanika yakasiyana zvakaitika kuti ude. Kune zvakawanda dzokugara kuongorora muna Northern Italy, saka kana uine vhiki kana maviri kupedza kuItaly, muri akasungwa kuwana dzimwe nzvimbo captivate iwe. Heano vaviri mazano nzvimbo kushanyira apo achishanyira mishoni Northern Italy nechitima.
Begin your Touring Northern Italy By Train mu Milan
The chitima Rwendo kubva kuMilan kuti Venice ndiye maawa yemanyorero maviri nehafu, with plenty of girl chitima vafambi anogona kuyemura chako chekufambisa hwindo. Kubva nguva iwe siya chitima yeredhiyo Venice, unogona kubata muchidimbu mukuru Grand Canal, kose mhando watercraft kunogona kuonekwa kufamba nenzira. Venice rinoumbwa 118 Zvitsuwa zvakabatana ne mabhiriji uye vakaparadzana ne migero. guta rino zvikuru Inozivikanwa norunako rwaro, akitekicha, Kunstwerke uye cobblestone migwagwa. Mufambi haabatsiri asi kuwira murudo enchanted nharaunda iyi. Pandakatenderera Northern Italy nechitima haisi kwakakwana pasina kushanyira Venice.
Wanga kutenderera Northern Italy nechitima? Let us know the favorite places that you have visited by tweeting us at @SaveATrain! tiri kushingaira ari evanhu migero yose, buda Saveatrain
#cinqueterra Itari milan northitaly travelflorence travelitaly travelvenice